WordPress backlinks प्राप्त गर्ने तरिकाहरू के हो?
ब्याकलिङ्कहरूलाई पनि आगत वा आगमन लिङ्कको रुपमा चिनिन्छ. यी लिंकहरू एक वेब पेजमा सेट गरिएका छन् तर अर्कोलाई संकेत गर्दै. आगमन लिङ्कहरूको संख्या बढाउँदै, तपाइँ आफ्नो साइट लोकप्रियता बढ्दै हुनुहुन्छ. यही कारण वेब स्रोतको ट्राफिक बढाउन र यो प्रयोगकर्ताहरू बीचको राम्रो तरिकाले बनाउन को लागि एक उत्तम प्रविधी हो. ब्याकलिङ्कहरूको संख्या र गुणस्तर Google को लागि एक प्रमुख महत्त्वपूर्ण कारक हो - boat appraisal hawaii. यसैले ब्याकलिंकहरू वेबमास्टरहरू द्वारा वेबसाइट रैंकिंग स्थिति बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ र एक वेबसाइटलाई अधिक एसईओ-अनुकूल बनाउँदछ. यदि साइटले धेरै ब्याकलिंकहरूद्वारा संकेत दिएको छ भने, यो प्रयोगकर्ताहरू द्वारा खोजी गर्न सम्भव छ.
WordPress backlinks उत्पन्न गर्ने कारणहरू के हुन्?
ब्याकलिंकहरूको मात्रा र गुण खोजी इन्जिन अनुकूलनमा एक महत्वपूर्ण कारक हो. बाह्य लिङ्कहरू वेबसाइटमा नयाँ आगन्तुकहरू आकर्षित गरी तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा ट्राफिक बढेर वेबसाइट अनुकूलनमा केही फाइदाहरू छन्. तिनीहरू अनुयायी आधार बढाउन र ब्रान्ड जागरूकता बढाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ. यसबाहेक, इनबाउन्ड लिङ्कहरू अर्थमा उपयोगी छन् कि यसले साइट काम गर्ने प्रदर्शनलाई सुधार गर्दछ र अन्य नेटवर्कहरूमा साइट लिङ्क गर्दछ.
WordPress को Backlinks कसरि जोडें?
धेरै वेब स्रोतहरू चलाउने वेबमास्टर्सहरू प्रत्येक साइटमा जडान गर्न ब्याकलिङ्कहरूको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्दछ।. यो सबै वेबसाइटहरूमा ट्राफिक वृद्धि गर्ने एक उत्तम तरिका हो. यद्यपि, केही वेबसाइट मालिकहरूले ब्याकलिङ्कहरू सही ढंगले सिर्जना गर्न उलझन महसुस गर्छन्.
सरल र कार्बनिक तरीकासँग एक्सचेन्ज ब्याकलिङ्कहरू बनाउनका लागि सरल र कार्बनिक तरीका सान्दर्भिक ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न अन्य साइटहरूसँग आदान प्रदान गर्नका लागि. तपाईं सजिलै संग आफ्नो आचार्यमा वेबमास्टरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको साथमा पारस्परिक लाभकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुनेछ आफ्नो साइटमा आफ्नो ब्याकलिङ्क राख्नु शर्तको साथ तपाईले आफ्नो भागबाट उहाँलाई नै गर्नुहुनेछ. यो जित-जीत प्रविधि तपाईं र तपाईंको साझेदार वेबसाइट दुवैको लागि उपयुक्त छ.
तपाईंको संभावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको उपन्यासहरू बारे र तपाईंको व्यापारमा परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।. तपाईंलाई यस जानकारी को तुरुन्तै प्रस्तुत गर्न र सम्भवतः र यसलाई विभिन्न प्रेस-रिलीज एजेन्सीहरूलाई वितरण गर्न आवश्यक छ. राम्रो-लिखित प्रेस विज्ञप्ति केही उच्च-प्राधिकरण समाचार साइटहरू द्वारा प्रकाशित गर्न सकिन्छ जुन तपाइँलाई एक लेखकको रूपमा इनाम प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ नि: शुल्कका लागि ब्याकलिङ्कहरूसँग।.
(2 9) उत्पाद प्रशंसापत्र
लिङ्कहरू निर्माण गर्ने अर्को कार्बनिक तरिका वस्तुहरू वा सेवाहरूको लागि प्रशंसा लेख्नको लागि हो जुन तपाईं उच्च स्तुति गर्नुहुन्छ।. यदि तपाईंको प्रशंसापत्र आवश्यक मानहरू पूरा गर्दछ भने, यो वेबसाइटमा प्रदर्शित गर्न सकिन्छ. फलस्वरूप, लेखकले प्रासंगिक ब्याकलिङ्कहरू पाउनेछ. उत्पाद समीक्षाहरू लेखकहरू लिङ्कहरू छन् जसले तिनीहरूलाई सिर्जना गर्दछ र प्रशंसक प्रमाणीकरण गर्दछ.
सामाजिक मिडिया च्यानलहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंले ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, गुगल + र अन्य जस्ता सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्नबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ।. तपाईं यहाँ आफ्नो व्यापार खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि लिङ्कहरू थप्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको वेबसाइटमा पुग्छ. धेरै सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न, तपाईंले निरन्तर रूपमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई ताजा र सान्दर्भिक सामग्री साथै विभिन्न दिशानिर्देशहरू, प्रतियोगिताहरू, भिडियोहरू, र इन्फ्रागोग्राफहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ।.